Madoobaaday: Madal Soo Bandhigid ah oo kaa Caawinaysa Iibintaada | Martech Zone
Khamiista, Oktoobar 4, 2012 Douglas Karr
Xakamey waa kulan khadka tooska ah iyo bandhig soo bandhigid loogu talagalay iibka. Tartanka tooska ah ee dadka waawayn sida WebEx iyo GotoMeeting, Crunched ayaa fududeeyay nidaamka iyadoo la helayo nidaam diiradda saaraya kulanka, la socoshada iyo wadaagista feylka, soo bandhigida ama shaashaddaada iyadoo loo marayo bogga internetka. Ma jiro barnaamij loogu talagalay qofkasta inuu soo dejiyo oo uu dejiyo… uun buu ku kulmi karaa oo tagayaa goobta kulanka loogu talagalay!
Crunched waxay bixisaa sifooyinka soo socda ee muhiimka ah:
kulan - Bilow shirarka webka adigoon softiweer nuugayo. Koontadu waxay la socotaa URL shaqsiyeed iyo nambarka shirarka.
Connect - La macaamil macaamil badan oo macaamiisha ah. Wada hadalka ka sokow, waxaad sidoo kale daawan kartaa astaanta bulshada ee kaqeybgalaha iyo macluumaadka deegaanka.
bandhigaan - Maare oo soo bandhig dusha sare ama wadaag shaashaddaada. Kooxdaada iibintu way wadaagi kartaa oo duubi kartaa bandhigyada sidoo kale!
track - Ku soo dir iimaylka bandhigyada adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasha la socon kara, fiiri cidda aqrinaysa iyo muddada
Iskaashiga - La wadaag bandhigyada, shirarka, qoraalada iyo emaylka kooxdaada si qof walba uu gacan uga geysto in heshiisyada la dhammeeyo
Kooxaha iibku sidoo kale way wadaagi karaan bandhigyada waxayna ilaalin karaan cabirrada dhammaan shaqaalaha iibka. Tani waxay daaha ka qaadi kartaa macluumaad qaas ah oo ku saabsan waxa ay ku kala duwanaanta soo bandhigidu u dhexeyn karto kuwa waxqabadka sarreeya iyo kuwa kale ee kooxdaada iibka ah.
Tags: barnaamijka softiweerkacufanbeddelka qaab dhismeedkasoftware iibkawebex beddelaad